Air Côte d'Ivoire dia mandray ny A320 vaovao amin'ny lanonana maro loko ao Toulouse
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Côte d'Ivoire dia mandray ny A320 vaovao amin'ny lanonana maro loko ao Toulouse
Air Côte d'Ivoire, kaompaniam-peon'ny Ivory Coast monina any Abidjan, dia nahazo ny A320 vaovao tamina lanonana izay natao tao amin'ny Airbus Delivery Center tao Toulouse ny alatsinainy 17 Jolay. Ity lanonana ity dia notarihin'i Didier Evrard, Programme filoha lefitra mpanatanteraky ny Airbus ary ny jeneraly Abdoulaye Coulibaly, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Air Côte d'Ivoire.
Ny Air Côte d'Ivoire dia efa nisafidy ny fianakavian A320 noho ny tranony tena mampahazo aina, ambany ny vidin'ny fandidiana ary mahomby ny fanjifana solika. Efa miasa fiaramanidina Airbus enina (A319 efatra sy A320 roa) ao anatin'ny rafitry ny fifanarahana fampanofana. Ny lalana Air Côte d'Ivoire dia miasa lalana 25 samihafa any Afrika Andrefana sy Afrika Afovoany.
Ny tranon'ny fiaramanidina aterina anio dia voalamina amin'ny kilasy roa (kilasy fandraharahana 16 sy seza kilasy toekarena 132). Ny tolotra kilasy fandraharahana dia manome fiononana tsy azo resena miaraka amin'ny seza "Celeste" vaovao nomen'i Stelia Aerospace, raha toa kosa ny kilasy toekarena dia manome serivisy avo lenta, indrindra amin'ny resaka rafitra jiro sy ny fifandraisana internet.
ABA, mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany hafa izay manentana an'i Trump handinika indray ny baiko mpanatanteraka misy fiatraikany amin'ny fizotran'ny fangatahana visa